Codsiga Ganacsadeyaasha ee Gaadiidka Dadweynaha ee Antalya wuxuu Bilaabmay - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaCodsiga Gaadiidka Gaadiidka Dadweynaha ee Antalya
16 / 10 / 2017 07 Antalya, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Metropolitan Municipality oo ka faa'iideysanaysa gaadiidka dadweynaha ee nabadgelyo leh oo raaxo leh, kana kooban maadooyin iyo khabiiro daraasaadka Kooxda Hawlaha Gaadiidka Gaadiidka, adoo ku daraya khadad cusub iyo kordhinta tirada duullimaadka ayaa soo baxay baahida loo qabo gaadiidka cusub ee gaadiidka dadweynaha.
Ka dib, Metropolitan Municipality, mitirka mitirka 12 100, mitirka mitirka 8.5 50, mitirka mitirka 5.5, iibka mitirka 50 ayaa bilaabay inuu iibsado gaariga. Si kastaba ha noqotee, Rugta Ganacsiga ee Busmaalayaasha ee Antalya iyo Saynisyahanada, dadka reer Antalya uma baahna gaadhi cusub si ay ugu guuraan nabadgelyo iyo raaxo, baabuurta hadda jira waxay sheegteen in adeegga la siin karo dadka reer Antalya.
Duqa magaalada Antalya Menderes Türel, oo ka dhegeysanaya codka ganacsiga, qorshaynta dhammaan noocyada waddooyinka, sida diyaarinta codsiyada duulimaadka sida ku xusan soo jeedinta Guddiga Sayniska Farshaxanimada iyo Artisans ayaa sharaxay.
Madaxweynaha Türel wuxuu sheegay in uu rajeynayo in Antalya uu ku faraxsanaan doono ficilkaan, madaxweyne-yaasha Yasin Arslan ayaa u mahadceliyay Türel si uu u dhageysto codka ganacsatada.
Rugta Sayniska Farshaxanimada iyo Xirfadlayaasha waxay soo bandhigeen soo jeedintooda Waaxda Gaadiidka. Qorshaha ay soo jeediyeen by farshaxan-yahanka si loo xaliyo dhibaatooyinka gaadiidka dadweynaha ee Antalya (16 OCTOBER MONDAY) ayaa maanta lagu hirgelin doonaa. Hadda socdaalka iyo joogitaanka socdaalka, sida ay go'aamiyeen ganacsiga gaadiidka ayaa la qaban doonaa. Iyadoo khibradda gaadiidka gaadiidka, waxaa la filayaa in ay soo saaraan xalalka cabashooyinka ku saabsan gaadiidka dadweynaha.
Gaadiidka dadweynaha ee İzmir wuxuu bilaabmaa xilliga qaboobaha
Gaadiidka Gaadiidka iyo Diiwaangelinta Gargaarka Naafada Antalya
Codsiga Firefly ee gaadiidka
Rugta Ganacsiga ee Antalya iyo Fiktooriya